Lasa fitaovam-piadiana hamelezana an’i Tigré ny fanolànana faobe mahatsiravina atao amin’ireo vehivavy mandritra ny ady ao Etiopia · Global Voices teny Malagasy
Ampangaina ho manolana ao anatin'ilay ady an-trano ireo miaramila Etiôpiàna sy ny mpiaradia aminy
Voadika ny 18 Jolay 2021 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Français, English
“Vehivavy ao Tigré” an'i Rod Waddington nampiasàna ny lisansa CC BY-SA 2.0
Sarotra be ny mifantina izay tantara tena mampivarahontsana indrindra amin'ny ady an-trano mitranga ao amin'ny faritra. Misy tantaran'ny vehivavy iray 40 taona izay im-betsaka no niharan'ny fanolanana nataona vondrona iray misy miaramila eritreàna miisa 15, ary avy eo navelan-dry zareo teny amoron-dàlana. Misy ihany koa ny tantaran'ny vehivavy iray 34 taona niharan'ny fanolanana nataona miaramila Amhara 4 ary nanitrihana vy mahamay tany anatin'ny fivaviany mba handoroana ny tranonjaza. Ary avy eo ny tantaran'ny vehivavy iray 65 taona noterena hijery ny fanolanana faobe natao an'ireo zanany roa vavy, sy nodarohana teo imasony.
Tao anatin'ny adihevitra iray vao haningana teo anoloan'ny parlemanta britanika, novinavinain'ilay pôlitisiàna avy amin'ny Antokon'ny Mpiasa, Helen Hayes, ho vehivavy 10.000 tao Tigré raha kely indrindra no niharan'ny fanolanana hatramin'ny nanombohan'ny ady.
Tamin'ny Aprily lasa teo, nilaza i Pramila Patten, solontena manokan'ny Firenena Mikambana momba ny Herisetra Ara-Nofo atao mandritra ny Ady fa mety ho volana marobe no handalo vao hiaiky tanteraka ny halalin'ireo habibiana atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ao Tigré ireo manampahefana. Fanehoankevitra nataony nandritra ny adihevitra misokatra fanaon'ny Filankevi-Pilaminana ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny herisetra ara-nofo mifandraika amin'ny ady.
Ady vetaveta no mipoaka
Ny 4 Novambra 2020 no nipoaka ny ady tao amin'ny faritra Tigré ao Etiôpia. Nanao fanafihana goavana ny tao Tigré ny praiminisitra Abiy Ahmed rehefa avy niampanga ireo mpitarika ny firenena, ny Tigray Peoples Liberation Front (TPLF), ho nanafika toby miaramila federaly iray. Nihenjana ny tady teo amin'ny TPLF sy ny governemanta federaly hatramin'ny nahatongavan'i Abiy Ahmed teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2018. Nampangain'ny TPLF izy ho nanilika azy ireo tsy ho ao anatin'ny dingana politika federaly, raha izy kosa indray niampanga ny TPLF ho manakorontana ilay lisitra lavabe ho fanavaozana nampanantenainy rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy.
Nirefotra ny fihenjanana rehefa nanapaka hevitra ny TPLF fa hikarakara fifidianana federaly tamin'ny tapaky ny taona 2020 taorian'ny nanemorana ireo fifidianana nasiônaly noho ny fisian'ny valanaretina Coronavirus.
Kanefa ho an'ireo manaraka ny pôlitika ao amin'io firenena ao Afrika Atsinanana io dia tsy nanampoka ny fisian'ny ady. Taona iray talohan'ny nipoahan'ny fifandirana, im-betsaka namerimberina niantso ny hampihenana ny fifanenjanana ireo fikambanana toy ny Crisis Group.
Ny governemanta federaly nilaza ilay hetsiky ny tafika ho “fampiharana ny lalàna” ary nanambara fa nitsahatra ilay fifandirana, telo herinandro taorian'ny nahazoan'ny tafika federaly ireo tanàna lehibe tao Tigré. Kanefa, tsy amin'ny fomba ofisialy, miditra amin'ny faha-valon'ny volana isiany ny ady.
Fanolanana atao toy ny fitaovam-piadiana
Amin'ireo fanimbazimbàna mahatsiravina ny zon'olombelona amin'ny ady ao Tigré, ny tantaram-panolanana faobe no ratsy indrindra.
Nirotsaka hiady amin'i Tigré ny governemanta etiôpiàna sy ireo tafiky ny faritra Amhara mpiray vodirindrina sady mpiaradia aminy. Taterin'ireo niharam-pahavoazana fa ny ankamaroan'ireo herisetra sy fanolanana dia ny andia-miaramila eritreàna sy ny tafika Amhara avy ao amin'ny fanjakana Amhara mpiray vodirindrina aminy no nahavanona azy ireny.
Efa am-bolana maro no nakaton'ny governemanta eritreàna ny faritra Tigré tsy ho azon'ireo mpanangona vaovao hidirana. Saingy vantany vao nahazo alàlana ho afaka miditra ireo mpanangona vaovao sy masoivoho mpitondra fanampiana, nanomboka nitosaka ireo tantara maharikoriko.
Relijiozy iray ao amin'ilay faritra, izay nisafidy ny tsy hitonona anarana noho ny antony fiarovana aina, no nilaza tamin'ny The Guardian fa mitranga any amin'ny faritra rehetra lalovan'ireo andian-tafika etiopiàna sy eritreàna ny fanolanana.
Ny fanolanana dia manomboka amin'ny zaza 8 taona ka hatramin'ny lehibe 72 taona. Tena miparitaka be, mahita izany foana aho any rehetra any, an'aliny maro. Imasom-bahoaka io fanolanana io, eo anatrehan'ny fianakaviana, vady, eo anatrehan'ny rehetra. Tapahana ny tànana aman-tongotr'izy ireny, amin'ny fomba mitovy daholo.
Evelyn Regner, lehiben'ny Kaomisiôna Misahana ny Zon'ny Vehivavy sy ny Fitovian-Jo ao amin'ny Parlemanta Eorôpeàna (FEMM) niantso ny hitazonana ho tomponandraikitra ireo izay nahavanona ny fampiasàna ny herisetra ara-nofo ho toy ny fitaovam-piadaiana amin'ny ady ao Tigré.
Efa taonjato maro no nampiasaina ho toy ny fitaovam-piadiana ny herisetra ara-nofo atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Indrisy fa dia mbola toy izany ihany no tranga misy any anatin'ireo fifanolanana marobe manerana izao tontolo izao ary ohatra iray hafa amin'izany ny ady an-trano any avaratr'i Etiôpia.
“Nofy ratsy tsy mampino”
Hatramin'ny nanombohan'ny ady, nanao fanentanana ireo avy ao Tigré fa monina any am-pielezana (diaspora) mba hampitsaharana ny ady ao Tigré. Manana havana akaiky na havan-tetezina ao amin'ilay faritra ny ankamaroan-dry zareo ireny.
Niresaka tamina Tigreiàna maromaro miaina am-pielezana ny Global Voices, isan'ireny i Meron, 42 taona, monina ao Chicago, izay manana anabavy sy zanak'olom-pianadahy ao an-tanànan'i Adigrat ao Tigré.
Tena nofy ratsy ny zavatra manjo ny fianakaviana sy ny vahoakanay, nofy ratsy tsy mampino. Isaorako Andriamanitra fa hatreto dia tsy misy mampanahy ny anabaviko sy ireo fianakaviako akaiky, saingy manana havan-tetezina aho izay voalaza fa maty na voaolana. Nefa ny tsy maha-tafandry mandry anay rehetra isan-kalina, dia mitohy ny ady, araka izany dia tsy misy na iza na iza miaina fahalemana.
Maro ireo hetsipanoherana nitranga nanerana izao tontolo izao manohitra ny zavatra izay faritan'ireo Tigreiàna ho ady fandripahana atao amin'ny fianakavian-dry zareo. Lazain-dry zareo fa efa an'aliny maro ireo sivily maty novonoina hatramin'ny nanombohan'ilay ady.
Ankoatra ireo famonoana faobe sy fanolanana manjo ny sivily, miatrika kere ankehitriny ny ao Tigré, izay mety mbola hamoizana aina an'arivony maro fanampiny.
Ny USAID maminavina hoe olona 900.000 ao Tigré no miatrika hanoanana lalina. Hentitra ny tenin'i Samantha Powers, mpitarika ny USAID, niampanga ny governemanta etiôpiàna amin'ny fibahanana ireo fanampiana ho an'ny sivily tra-pahasahiranana.
“Izay Tigré rehetra fantatro dia samy mandresy lahatra daholo mba hitsaharan'ilay ady,” hoy i Meron. “Raha tsy mitsahatra io, atahorako ho ny anabaviko no ho voaolana manaraka eo ary ny fianakaviako no ho faty.” Ny tahotr'i Meron dia maka ho ohatra ireo lehilahy marobe izay novonoin'ny tafika etiôpiàna izay sady naka sary ny tenany ihany tamin'ny findainy ry zareo teo am-panatanterahana izany. Nisy tatitra ireny heloka bevava ireny, ary voamarin'ireo mpamoaka vaovao toy ny CNN ary ny The Telegraph taorian'ny nivoahan'ny lahatsary mampiseho ireo miaramila etiôpiàna mifititra lehilahy tsy nitondra afa-tsy tanam-polo. Santionany amin'ireo mety ho heloka an'ady tsy mbola nanaovana fanadihadiana ireo
Mbola mitsingilahila ny toedraharaha ao Tigré satria mivoady ny hiady ireo mpitarika ao Tigré mandra-panosik'izy ireo ny tafika eritreàna sy Amhara.